Shina Rechargeable No Bark Collar mpamatsy sy mpanamboatra - Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Home > Products > Tsy misy bark Collar > Azo ampitarina tsy misy kitapo
Ity manaraka ity dia ny momba ny fifandraisan'ny Rechargeable No Bark Collar, manantena aho fa hanampy anao bebe kokoa amin'ny Rechargeable No Bark Collar.
Herinaratra azo fehezina amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo vita amin'ny alikaola
Elektronika fanamafisam-peo fanamafisam-peo elektrika azo zahana amin'ny alàlan'ny fomba fiasa 3, azonao atao ny mametraka ambaratonga fahatsiarovan-tena 7 ary haingam-pandeha manafintohina 9. Afaka amboarina ny fehiloha TPU 1,5cm. Ny endrika lamaody miampy loko isan-karazany azo isafidianana indrindra, mety indrindra amin'ny alika 15 × 110 kilao.
Feon-kiran'olombelona tsy misy alahelo ary fanamafisam-bazaha tsy misy fijanonana tsy miato amin'ny alikaola
Feon-tsolika tsy misy alahelo sy fanamafisam-peo tsy misy fijanonana tsy mampitsahatra ny fanenoman-doko amin'ny alàlan'ny fiofanana ho an'ny olombelona, ​​haingam-pandeha fanatanjahantena 7 ho an'ny safidy, mampiofana mora ilay alika, miaraka amin'ny bateria 250 mAh, azo zahana mora.
Rechargeable sy rano azo aseho anti-bara Collar amin'ny jiro mandeha amin'ny jiro
Izahay dia mamatsy Rechargeable And Waterproof Led Display Anti Bark Collar With Led Light.We dia mpamokatra sy mpanondrana matihanina, napetraka ao amin'ny orinasa Jan.2011,2600 metatra toradroa, mpiasa 120, manana ny fahaiza-manao fampandrosoana sy fikarohana, nanolo-tena ho tonga avo indrindra azo itokisana. -tech orinasa amin'ny mpamatsy biby. SGS & BV nitazom-bidy ny mpamatsy an'i Sina. Vahaingo ny fenitra iraisam-pirenena CE ROHS. Izahay dia afaka manome ny mpitiavana sy ny biby fiompiny amin'ny kalitao lafo vidy sy lafo vidy, izay manarona ny fiainany, ny asa sy ny fialam-boly. Manantena izahay fa lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Chine ianao.
Shenzhen TIZE Technology Co, ltd dia mpamatsy china mpamatsy an'ny R&D, fanamboarana sy serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ny Azo ampitarina tsy misy kitapo .Roa vola amin'ny fivarotam-bokatra ataonay sy manamboatra ny fonja vaovao indrindra, fancy Azo ampitarina tsy misy kitapo, ​​hanome anao lafo vidy izahay.